Imililo e-Trans-iBaikal Territory. Izimbangela le nhlekelele
Fire - amandla ngendlela emangalisayo bemvelo. Sekungamakhulu eminyaka abantu ezifuywayo kwamphoqa ukuba bazuze esintwini. Siyabonga kuye, kusihlwa uhlale umlilo futhi zifudumale ebusika. Nokho, naphezu kwalokhu, wahlala zasendle futhi iyingozi. Omunye hambisa okungalungile - umuntu eba yisitha. Minyaka yonke, e emakhoneni ezahlukene iplanethi yethu okhela ushisa amahlathi. Yehluka nomunye ngobuningi futhi zenza umonakalo: isikhathi a umonakalo kuphela kancane, ukulimala kwempahla, elinye - asuse inqwaba yabantu.
I imililo elimazayo Zabaikalskiy esifundeni
Ngokwemibiko ethile, imbangela eyinhloko ushisa amahlathi kuyinto banal isici womuntu. Ngisho Butt usikilidi, ovele aphonswe phansi, kungaholela nemiphumela eyinhlekelele. Kodwa inkinga eyinhloko esivuthayo engalawuliwe izimila ezomile, okuholela umlilo kalula adluliselwa emahlathini enkulukazi. Lokhu kusebenza bayazi vypalki utshani obomile hhayi kuphela, kodwa futhi yimuphi omunye amalangabi evulekile. Esikhathini Trans-iBaikal Territory isici raged ngehlobo elidlule. Ashisiwe 1619 amahektha.
Ubani owabangela zonke ukusha kwamahlathi ku Trans-iBaikal esifundeni, manje uzama ukuthola abaphenyi. Lapho benza kwaziwe ukuthi eqinisweni kuba - a ukunganaki elula noma ohlose okubi?
Iqiniso lokuthi kwakukhona isandla womuntu, kubonisa ukuphindukuzalwa kuyiqiniso kunalokho ngokuqephuza. Imililo e-Trans-iBaikal esifundeni has a imvelo kunalokho ongaziwa - umlilo zenzeka kanyekanye ezindaweni ezahlukene. Yonke into nzima yokuthi abatakuli ezitholakala emahlathini kwentombazane eyayifuna bavuselele "umlilo" ne ibhokisana lokugcina itiye noma ikhofi uphethiloli. Inani eliqondile abenzi bokubi ayaziwa, kodwa kukhona izinsolo ukuthi wenza iqembu eyonakalisayo. Uma sicabanga ematfuba ukuthi lokhu nomlilo obhubhisayo uvele evamile ngendlela ejwayelekile, kungenzeka wayeyoba isikhungo esisodwa kuphela. Ngokwesibonelo, lokhu kungenzeka ngenxa yalokho sokuboniswa umbani, kodwa njengoba umthombo ukuthungela bahluke ngokuphelele, kuyacaca ukuthi kwaba wokhelwa othile. Cindezela unobhala kweNhloko Yombuso wanezela, isimo saba sibi kakhulu esihle umlilo sezulu izimo - ezomile, imimoya enamandla kanye okushisa aphakeme.
izenzo Active labatakuli
Ukucisha imililo ku Trans-iBaikal esifundeni, iziphathimandla ahehe izicishamlilo engaphezu kwamakhulu amabili futhi abangaba ngamashumi ayisihlanu izingcezu imishini, phakathi awo futhi izindiza ezimbili. Ukusiza abatakuli yena wafelwa wathumela enophephela emhlane MOE. Ngokusho idatha zakamuva, izilinganiso ngemithetho eqinileko yokuvikeleka, futhi wamemezela isimo esiphuthumayo wayethunjiwe. Lokhu kusho ukuvinjelwa Imininingwane ekuvakasheni amahlathi nezindawo eziseduze. Iziphathimandla ukuvusela izakhamizi zakule ndawo futhi cottagers wangibuza ngomusa ukuba wenze umlilo ezweni evulekile. Ngenhlanhla, izicishamlilo wakwazi ukuqeda ezingaphezu kuka nanhlanu imililo ehlukile ku endaweni amahektheli esingaphansi anamabini amawaka.
Ngokusho idatha olungekho emthethweni, izikhungo of imililo ngokushesha lasakazekela ezindaweni eziningi. Imililo e-Trans-iBaikal esifundeni abalwa eziningi ezindaweni elishumi elinamithandathu. Wahlupheka Shilka, Agin, Chita, Akshinsky, Chernyshevsky Boleysky, Khilok, Karimsky, Mogoytuysky, Krasnochikoisky, Kyrinsky, Nerchinsk, Mogoytuysky, Olovyannikovsky, Onon, Petrovsk-Zabaykalsky futhi Ulyotovsky District. Inani elikhulu ukusha kwamahlathi ezilotshwe Chita - amabili nesishiyagalombili imililo emikhulu. Njengoba wazi, ezingeni eyinhloko kungaba ukusiza ukuvimbela umlilo ezihlukahlukene nezinye izilonda.
Izisulu kanye Ukulimala Uqedile
Ngeshwa, uma kuziwa zinhlekelele ezinkulu, funda isimo olunembile onokwethenjelwa ezindabeni kunzima kakhulu. Ngokusho kwaziswa, njengoba kushone abantu abayisithupha balimala kabi futhi amathathu wabulawa. Bonke abayosinda abahlinzeke kosizo oluphuthumayo. Ngakho izisulu umlilo Trans-iBaikal esifundeni zafakwa ngokushesha esibhedlela. Phakathi kwabashonile yingane eneminyaka emithathu. Ngenxa gusty onamandla lo ovuthayo ehlathini, lasakazekela emzaneni Smolenka. Ngokuphelele kushiswe wokubambisana "Glade" nezinye izindlu ezazisemizini insimu yalo. Ngaleso sikhathi, kwathiwa ngokushesha limenyezelwe imodi basishiye. Izakhamuzi ucele ngokushesha ukushiya ngomzana, ukuze abatakuli kungathatha umlilo inhlekelele kusukela ekukhokheni. Futhi, abantu abavela ezigodini ezakhelene abezwani bakhuthazwa ukuqoqa izinto zabo ezibonakalayo futhi imibhalo, ukuthi uma esiphuthumayo ungakwazi masinyane ukushiya endaweni eyingozi.
Isimo nzima yokuthi kwehla umlilo eduze emadepho lamasosha, lapho isikhathi eside egcinwe isignali izinhlamvu namabhomu. Abanye abazibonela zithi ukuqhuma yezwakala. Ngenhlanhla, lesi sehlakalo ucishe eligwadulekile namuhla. Iziphathimandla wathatha izinyathelo ephumelela kunazo zokuvimbela ukugwema Ukuphinda esizayo. Ezimweni ezinjalo kubalulekile ukuqaphela ukuthi ikhambi lenkinga incike Umsebenzi wawo wonke indlela isakhamuzi. Udinga ukwenza yonke imizamo ephelele Trans-iBaikal Territory ayisekho ku omlilo avuthayo.
Le ngozi ngesikhathi Reftinskaya: Izimbangela Nezingozi umonakalo isithombe
Ikotishi Village "Gardens Vyazemskys": incazelo, izici, indawo kanye nokubuyekeza
Likuphi endlunkulu UN - inani "zone ngamazwe"
Ihhotela Merperle Hon Tam kuyona 5 * (Vietnam / Nha Trang): incazelo kanye nokubuyekeza
Ikhambi elihle kakhulu hemorrhoids
Kanjani Kapitoshka ekhaya: umuntu ujabule izingane kanye nabantu abadala
Igolide leaf. Gilding ngegolide leaf